Ukusetshenziswa Kwenyongo Yesilwane Ngokwesiko – The Ulwazi Programme
Ukusetshenziswa Kwenyongo Yesilwane Ngokwesiko
Sibe nengxoxo noMama abathathu okungoQhamukephi noSuthiphi Sibiya kanye noPhekhona Ngidi mayelana nokusetshenziswa kwenyongo ekhaya uma kunomsebenzi wesintu. Labomama abangixoxela bahlala endaweni yaKwaMaphumulo beze eThekwini ngokuzosika induma. Omama bachaze ukuthi kukhona izinto eziwusiko ezenziwa kunoma imuphi umndeni. Ukugcina isiko kuncikene kakhulu nokuhlabela amadlozi. Esilwaneni leso esihlatshiwe kubalulekile ukuthi umndeni wazi ukuthi yiziphi izingxenye zesilwane ezibalulekile emadlozini njengenyongo.
Inyongo ibalulekile kakhulu ekhaya uma kwenziwa umsebenzi. Ukubaluleka kwayo ubona uma wenza umsebenzi ayisali, uma kushiswa impepho isuke ifunwa ngabadala uma wenza umsebenzi. Ukuze kubonakale ukuthi ibalulekile ingoba uma intombi iyogana ithelwa ngenyongo kubo kanye nasemzini, futhi sibona nesikhumba sayo sisetshenziswa njengophawu kubantu okuyibo abasuke beqondene nomsebenzi njengokuthi ifuthwe ifakwe emzimbeni walowomuntu.
Kubalulekile ukuthi uma kwenziwa umsebenzi ekhaya kushiswe impepho kufakwe inyongo phakathi. Uma ungakwenzanga lokhu kuyafana nokuthi ubuzenzela idili lakho ebelingadingi amadlozi akini. Ukushiswa kwayo kuwuphawu lokumema amadlozi. Inyongo itholakala ngemuva kokuthi isilwane leso sesibulewe.
Imisebenzi Eyenziwa Inyongo
Uma ngabe kade umuntu eshonelwe uyagezwa, kuhlanganiswa inyongo, umswane kanye namanzi.
Uma intombi iyogana ithelwa ngayo. Kuhlatshwa inkomo kubo kanye nasemzini iyathathwa inyongo igcotshwe ngaphansi kwezinyawo zombili. Kuseke kwenzelwa ukuthi bangahlukani kalula. Inyongo isuke seyihlanganisa amadlozi abo nokuthi lihlenge intombi ikwazi ukuwasebenzisa womabili amadlozi uma isiwumakoti.
Kwabanye uma intombi kade ikhulelwe, enhlawulweni kuba khona imbuzi yokugeza umuzi, kuthathwa inyongo igcotshwe onyaweni.
Uma unesinyama inyongo iyasebenza ngoba uma uya ezinyangeni zikuhlolela zithi kufanele ugezele isinyama. Uma usugeza bazokutshela ukuthi ubothenga inkukhu emhlophe ukuze bezokwazi ukukhipha inyongo izobe isiyathathwa ihlanganiswe neminye imithi yokugeza.
Inyongo ibalulekile kakhulu futhi iyaqashelwa, ayihlali noma yikanjani ngoba kukhona labo abenza okubi uma iwele ezandleni zabo bangabulala umndeni wonke ngayo ngoba ibalulekile emadlozini akulowomuzi.
1 thought on “Ukusetshenziswa Kwenyongo Yesilwane Ngokwesiko”
Thina esihlala noma esizalelwa emadolobheni sisenkingeni ngoba asiwalandeli amasiko kanti futhi asiwazi.